Salaamanews » Dabley hubeysan oo weerartay wasiirka amniga Puntland
Home » Warar Dabley hubeysan oo weerartay wasiirka amniga Puntland Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 5th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Dagaal beeleed ka qarxay gobolka GalgaduudRa’isal wasaare Shirdoon oo booqday xarumo muhiim ah oo ku yaalla KismaayoKooxda al-Shabaab oo oday dhaqameedyo ku xirtay gobolka GalgaduudAl-shabaab oo weerar ku qaaday Ciidamada Huwinta ah Weerar lala rabay safaaradda Turkiga ee Muqdisho oo fashilmay
Kooxda oo ku hubaysneyd qoryaha daran-dooriga u dhaca ayaa rasaas badan ku furtay hoteelka Panorama ee magaalada Boosaaso, halkaasoo uu ku sugnaa wasiirka iyo saraakiil ciidan.
Dad goob joogayaal ahaa ayaa sheegay in dableydu ay u muuqatay inay ka cabsaneysay ciidamada ilaalada Hotel-ka iyo askarta ku sugan xarunta SPU uu ku dhaw hoteelka uu ku sugnaa wasiirka.
Ilaalada wasiirka ayaa iyaguna rasaas xooggan ku jawaabay, mana cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay is-rasaaseynta, waxaase la soo sheegayaa in dhaawaca shan ruux la dhigay cisbitaalka Boosaaso.
Maamulka Puntland ayaanan ka hadlin weerarka, mana jirto koox sheegatay masuuliyadiisa, laakiin warar hoosaad ay heleyso shabakaddan Salaamanews, ayaa waxay sheegayaan in weerarku uu aanu qabiil ku lug leeyahay.
Weerarka ayaa imaanaya labo maalin kaddib markii ciidanka Puntland ay sheegeen inay dileen saddex ka tirsan askarta ururka Al-Shabaab, shan kalena ay ka dhaawaceen kaddib markii ciidanka lagu soo weeraray saldhig 40 km u jira magaalada Boosaaso.
Tags: warar « Qoraalkii HoreCiidamada huwinta ah oo billaabay dagaal jubada hoose iyo Gedo looga saarayo Al-shabaab	Qoraalka Xiga »AMISOM oo sheegtay in sanadkii hore uu dhintay magaca Al-shabaab	Halkan Hoose ku Jawaab